CNC Router Atc Akụrụngwa arịa ụlọ osisi Cabinets Machine na-akpụ osisi - Jinan Apex Machinery Equipment Co., Ltd.
ATC cnc rawụta nwere linear auto tool changer 12 ngwaọrụ, nwere ike họrọ 10 ngwaọrụ, 8 ngwaọrụ, 6 ngwaọrụ wdg
9.0KW HSD ATC spindle amaara nke ọma, ike ịbelata, mkpọtụ dị ala, ogologo oge ọrụ.Nhazi ndị ọzọ gụnyere sistemụ njikwa Taiwan LNC, Japan yaskawa servo moto, Taiwan Detal inverter, ụgbọ okporo ígwè HIWIN, Helical rack wdg.
Siri ike ife osisi usoro, ọnụ ụzọ nke kabinet, osisi ụzọ, nka osisi ụzọ, dịghị-agba ọnụ ụzọ, zere ifufe, usoro nke nka window, akpụkpọ ụkwụ ihicha igwe, kabinet nke ebre igwe na osisi, Mahjong table, kọmputa table, yana ngwa ndị ọzọ na-abụghị ígwè na ihe dị nro.
3 Axis 1325 osisi CNC rawụta ihe osise maka ime arịa ụlọ
Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ osisi: CNC rawụta nwere ike iji rụọ ọrụ osisi siri ike, arịa ụlọ mahogany, ọnụ ụzọ agba MDF, ọnụ ụzọ osisi siri ike, ọnụ ụzọ ndị mejupụtara, ọnụ ụzọ kọbọd na windo, n'akụkụ igbe, ihuenyo mpịachi wdg.
Ụlọ ọrụ mgbasa ozi: CNC rawụta nwere ike kanye ụdị akara ọ bụla, ngwaahịa akara, ụghalaahịa, akara aha, baajị, onyinye ịchọ mma, nke edobere.
Ihe nrite, asambodo, ihe ncheta, okpokolo agba foto, ihe ndozi arịa ụlọ, efere PVC, mbadamba PCB (ịkụ osisi na ihe osise), mbadamba ụcha abụọ, acrylic wdg.
Ụlọ ọrụ nka: N'ime osisi, achara, osisi organic, efere agba okpukpu abụọ, kristal na ihe ndị ọzọ na ụdị dị iche iche mara mma na ihe osise ederede.
Nhazi dị elu 6060 ATC Mold Aluminom osise igwe CNC Router
Ọ dị mma maka ịka ihe, igwe igwe na igwu ihe n'ụzọ zuru ezu ụdị ihe niile
dị ka ígwè, ọla kọpa, aluminom na plastik.
Itinye n'ọtụtụ ebe maka ụgbọ ala, ịkpụ injection, ironware ebu na kanye ebu ụlọ ọrụ.
Karịsịa e mere maka osise na-egwe ọka ebu, ugogbe anya, elekere, panel, baajị, ika, graphics na okwu nke atọ akụkụ na n'èzí si sleeking nke nnukwu size.
Osisi CNC na-atụgharị igwe akpaaka osisi lathe
Osisi lathe bụ ngwaọrụ nwere ike ịmepụta ihe ndị dị ka steepụ steepụ, nhazi n'osisi, na ndị ọzọ.
A na-arụ lathe osisi CNC site na otu panel nke onye ọrụ na-achịkwa.
Emebere igwe lathe maka cylindrical ma ọ bụ conoid workpieces, dịka ọmụmaatụ ogidi, ihe mgbochi, ụkwụ oche, wdg.
All lathes na-arụ ọrụ otu ụzọ.USB ohere ngwaọrụ,atụgharị garland, a molding.single axis, double agụba,2 iberibe agụba cutters.
Maka mmepụta nke ngwá ụlọ osisi siri ike, steepụ osisi siri ike, ogidi osisi, osisi siri ike nke ala osisi, ihe ịchọ mma osisi, nkà osisi,
dị ka igwe na-arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe.Na-emetụta ngwá ụlọ, steepụ, ihe ịchọ mma, ụlọ ọrụ nka osisi, wdg.
Ngwaahịa ikpeazụ gụnyere ụdị ọrụ cylindrical dị iche iche, ụdị efere, ụdị tubular na nka osisi ụgbọ, dị ka kọlụm steepụ dị iche iche, kọlụm Rome, kọlụm n'ozuzu, tebụl ma ọ bụ oche ụkwụ, ebe a na-asa akwa, ite osisi, tebụl osisi, bat baseball, arịa osisi ụgbọ ala. , kọlụm akwa ụmụaka, wdg.
Jinan Sale Akpaaka CNC Metal Cutter Steel Plasma Flame Cutting Machine
A na-eji ya eme ihe na ụlọ ọrụ dị ka ikuku ikuku, igwe ugbo, igwe ihe owuwu, ụgbọ okporo ígwè, nrụpụta igwe mbuli elu, ụgbọ ala pụrụ iche, nrụpụta ngwá ọrụ, mmepụta mmanụ, igwe nri, mgbasa ozi mara mma, ọrụ nhazi nke mba ọzọ na ụdị ụlọ ọrụ niile metụtara mmepụta ihe.
Maka ígwè, aluminum, galvanized mpempe akwụkwọ, akwụkwọ ọcha, efere titanium na efere ígwè ndị ọzọ.
Nhazi shei nke igwe na ngwaahịa eletrọnịkị, akara mgbasa ozi, nka, ogige igwe, nrụpụta ụgbọ ala, ụlọ ụgbọ mmiri, ngwa eletriki, ịcha osisi.
Igwe eji egbutu eriri fiber maka igwe anaghị agba nchara / igwe anaghị agba nchara / ọla kọpa / aluminom
Akụrụngwa Laser Fiber dị mma maka ịkpụ ọla na mpempe akwụkwọ igwe anaghị agba nchara, efere igwe anaghị agba nchara, mpempe akwụkwọ nchara, Alloy Steel Plate, Spring Steel Sheet, Plate Iron, Galvanized Iron, Mpempe akwụkwọ galvanized, efere aluminom, mpempe ọla kọpa, mpempe ọla, efere ọla. , Efere ọla edo, efere ọla ọcha, efere Titanium, mpempe akwụkwọ igwe, efere ọla, tubes na ọkpọkọ, wdg.
Fiber Laser Cutting Machines na-eji ọtụtụ ebe n'ichepụta Billboard, Mgbasa Ozi, Ihe ịrịba ama, Signage, Metal Letters, LED Letters, Kitchen Ware, Mgbasa Ozi Akwụkwọ Ozi, Mpempe akwụkwọ Metal Processing, Metals components and Parts, Ironware, Chassis, Racks & Cabinets Processing, Metal Crafts. Ngwongwo ihe nka ọla, mkpọpu igwe elevator, ngwaike, akụkụ akpaaka, okpokolo agba, akụkụ eletrọnịkị, mpempe aha, wdg.